အလှူရှင်မရှိလို့.. နေ့စဉ် ပဲပြုတ်နဲ့ စားနေရတဲ့ ပရဟိတ မိဘမဲ့​ကျောင်းလေး
အလှူရှင်မရှိလို့.. နေ့စဉ် ပဲပြုတ်နဲ့ စားနေရတဲ့ ပရဟိတ မိဘမဲ့​ကျောင်းလေး “အ လှု ရှင် ​မ ရှ်ိ​ တော့ လည်း ပဲပြုတ်​နဲပဲ.​နေ့စဉ်​ စိတ်​မ​ကောင်းပါဘူးသားတို့သမီးတို့​ရေ . သွားလှူခွင့်​ကြုံပါရ​စေ … မိတ်​​ဆွေတို့လည်း ပါဝင်​ ကုသိုလ်​ ယူနိုင်​ကြပါ​စေ YGW ပရဟိတမိဘမဲ့​ကျောင်း မိုးညိုမြို့ […]
Victoriaကို ခဏထား လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဒီသီလရှင်လေးသတင်းကို ဖတ်ပြီး ရှယ်သွားပေးပါနော်
Victoriaကို ခဏထား လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဒီသီလရှင်လေးသတင်းကို ဖတ်ပြီး ရှယ်သွားပေးပါနော် ဥပ​ဒေ​ရေးရာ​လေ့လာသူနဲ့ ကျွမ်းကျင်​သူအချို့ (အချို့)က victoria အမှုတရားဝင်​သတင်းမထုတ်​ခင်​တုန်းက​တော့ ” ဒါက လုပ်​ထုံးလုပ်​ နည်းအတိုင်း လုပ်​​နေကြတာပါ။ ဥပ​ဒေအတိုင်းစစ်​​နေတာပါ။ လူ​တွေက စိတ်​​​စော​နေတာ။ ​စောင့်​ကြည့်​ပါဆိုတာ ” လို့ ​ပြောတာ လက်​ခံ​သေးတယ်​။ အခု […]
Victoria မေမေမျက်ရည်ကျပြီးပြောပြတဲ့ သမီးလေးနဲ့ပက်သက်ခံတဲ့စားချက်တွေကြားသိရပြီး မျက်ရည်ကျတဲ့အထိခံစားခဲ့ရတဲ့ချစ်သုဝေ
Victoria မေမေမျက်ရည်ကျပြီးပြောပြတဲ့ သမီးလေးနဲ့ပက်သက်ခံတဲ့စားချက်တွေကြားသိရပြီး မျက်ရည်ကျတဲ့အထိခံစားခဲ့ရတဲ့ချစ်သုဝေ ခေတ်၊သစ်တို့ရဲ့ မေမေချစ်သုဝေကတော့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းလှတဲ့ သူမရဲ့အပြုအမူလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တိုင်းကချစ်နေရတာပါ။ ကလေးအမေလို့ထင်မှတ်စရာမရှိရလောက်အောင် နုပျိုလွန်းသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်း ပီပြင်ကျွမ်းကျင်ရုံမကပဲ အဆိုဘက်မှာလည်း ပါရမီရှိသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ လတ်တလောမှာဖြစ်နေတဲ့ နေပြည်တော်က ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုကိစ္စအတွက်စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေရတာပါ။ သမီးလေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လည်း သူမတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လုံးဟာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမှုနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လည်း […]
” Breaking News !!! ပုဂံကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်စာရင်း သွင်းလိုက်ပြီ”
” Breaking News !!! ပုဂံကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်စာရင်း သွင်းလိုက်ပြီ” အဇာဘိုင်ဂျန်နို င်ငံမြို့တော် ဘာကူမြို့မှာ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ကနေ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပနေတဲ့ ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ကော်မတီရဲ့ ၄၃ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ […]
အလုပ်ရှင်အမျိုးသမီးကြီးကို အိပ်ယာထဲရက်စက်စွာသတ်ခဲ့တဲ့ လူသတ်တရားခံကို တရားရုံးမှသေဒါဏ်ချမှတ်လိုက်ပြီ
အလုပ်ရှင်အမျိုးသမီးကြီးကို အိပ်ယာထဲရက်စက်စွာသတ်ခဲ့တဲ့ လူသတ်တရားခံကို တရားရုံးမှသေဒါဏ်ချမှတ်လိုက်ပြီ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ဧပြီလ ၆ရက်နေ့က အသက်(၅၈)နှစ်အရွယ် မီးသွေး လုပ်ငန်းရှင် ဒေါ်ခင်ဖြူဖြူရှိန်ကို နေအိမ်အတွင်းမှာအသတ်ခဲ့ပြီး ငွေသိန်း(၂၀)ယူသွားတဲ့ အလုပ်သမားလူသတ်တရားခံကို မနေ့(ဇွန် ၅ရက်နေ့)က ပဲခူးမြို့၊ဒုခရိုင်(၃)တရားရုံးက ပုဒ်မ-၃၀၂(၁)(ဂ)နဲ့ သေဒါဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ပဲခူးမြို့၊အမှတ်(၂)နယ်မြေ ရဲစခန်းအပိုင်၊ မဇင်းရပ်ကွက်၊ရွှေဂူလေးဘုရားလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၁၃၃၁)မှာ နေထိုင်တဲ့ မီးသွေးလုပ်ငန်းရှင် […]
YBS နှစ်စီးပြိုင်မောင်းရာကနေ တစ်စီးက ကျနော့် ငယ်သူငယ်ချင်း ရဲ့၃နှစ်နဲ့ ၆လအရွယ်သားလေးကို တိုက်မိသွားတာပါ (ပြန်လည်ဖြန့် ဝေပေးဖို့အကူညီတောင်းခံခြင်း😢)
YBS နှစ်စီးပြိုင်မောင်းရာကနေ တစ်စီးက ကျနော့် ငယ်သူငယ်ချင်း ရဲ့၃နှစ်နဲ့ ၆လအရွယ်သားလေးကို တိုက်မိသွားတာပါ (ပြန်လည်ဖြန့် ဝေပေးဖို့အကူညီတောင်းခံခြင်း😢) မနေ့ က နာရေးတစ်ခု လိုက်ပို့ ဖြစ်တယ်.. ဇူလိုင်(၁)ရက်နေ့ ညနေ၅နာရီလောက် က အင်းစိန်ပေါက်တောဝ အနီး […]
နုတ်ထွက်စာတင်ထားတဲ့.. ကျောင်းဆရာလေး တဦးရဲ့…ရင်ဖွင့်သံ (တိုင်းပြည်အတွက် နစ်နာလှပါတယ်) အ လု ပ်ထွက်ဖို့တော့ပြင်ပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ပညာရေးစနစ်နဲ့အညီ ဆရာ/မ အင်အား ဖြည့်တင်း မှု မရှိဘဲ ပညာရေးစနစ်သစ်ကိုအောင်မြင်ချင်တဲ့ လူတွေကိုစိတ်နာလို့ မြို့ပေါ်မှာနေပြီး ဥာဏ်ရည်ကောင်းတဲ့ ကလေးတွေ ကို သင်ပြီး ဂုဏ်ယူနေတဲ့လူတွေ ကျေးလက်တောရွာမှာကျနေတဲ့ဆရာ/မတွေရဲ့အခြေနေကိုမသိဘဲ […]
တစ်ဦးတည်းသောသား၊ သမီးတွေကို ချစ်သူအဖြစ် ရွေးချယ်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်းများ
တစ်ဦးတည်းသောသား၊ သမီးတွေကို ချစ်သူအဖြစ် ရွေးချယ်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်းများ တစ်ဦးတည်းသော သား၊ သမီးတွေဆိုတာ ရှားပါးတဲ့အဖိုးတန်လေးတွေပါ။ ဆိုးတယ်၊ နွဲ့တယ်၊ ကလေးဆန်တယ် ဒါပေမယ့်လည်း အရေးအကြောင်းဆို အားအကိုးရဆုံးလည်း သူတို့ပါပဲ။ ချစ်သူရွေးမယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ဦးတည်းသော သားသမီးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းလေးတွေကတော့ ဒီမှာပါ။ (၁) တစ်ဦးတည်းသောသား၊ သမီးတွေဟာ အရမ်းအလိုက်သိတာကြောင့် […]
တောင်းစားရမှာရှက်လို့ …အမှိုက်ပုံက… စားကြွင်းစားကျန်တွေ …တိတ်တိတ်လေး စားနေတဲ့အဖိုး
တောင်းစားရမှာရှက်လို့ …အမှိုက်ပုံက… စားကြွင်းစားကျန်တွေ …တိတ်တိတ်လေး စားနေတဲ့အဖိုး အင် ဒို နီးရှားနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဂျာဗားစီရင်စု၊ Pasar Besar မှာ သနားစဖွယ်အဖိုးအိုတစ်ယောက်ဟာ သူများတွေဆီကနေ တောင်းစားရမှာ ရှက်လို့ထင်ပါရဲ့ ၊ လူသူကင်းတဲ့ အမှိုက်ပုံးရှိရာကို တိတ်တိတ်ကလေးသွားပြီး၊ ရသမျှလေးတွေ ခြစ်ခြုပ်စားသောက်နေရှာပါတယ်။ ဒီ အြ […]
ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၈၉ ရှိနံမည်ကြီးကြက်တောင်ကစားသမား Kate Foo Kune ကို ၂ ပွဲပြတ်နဲ့ အနိုင်ရလိုက်ပြန်တဲ့..မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် သက်ထားသူဇာ
ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၈၉ ရှိနံမည်ကြီးကြက်တောင်ကစားသမား Kate Foo Kune ကို ၂ ပွဲပြတ်နဲ့ အနိုင်ရလိုက်ပြန်တဲ့..မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် သက်ထားသူဇာ ဂုဏ်ယူပါတယ် ညီမလေးရေ . . . ယနေ့ ည Ivory Coast 🇨🇮 နိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော Cote d’ivoire […]